Isithombe: SITHUNYELWEUmsakazi wesiteshi somphakathi iSiyathuthuka FM uAndile Mthembu unxusa intsha yase Mzansi ukuthi isebenze kanzima ukuze ibe nekusasa eliqhakazile.
Abafowethu kanye nabangani bami nabo badlala indima enkulu ekungigqugquzeleni ukuthi ngibe wumsakazi ovelele lokho okungenza ngibone ukuthi bayalibona ikhono lami lokusakaza,” echaza.
“Ngiqale ukusebenza emsakazweni ngonyaka odlule lapho ngenza uhlelo lwezemidlalo ekuseni ohlelweni iBreakfast Show eqala ngehora lesithupha  kuze kube yihora leshumi . Ngiphinde ngibuye ngoMgqibelo ngizokwethula ezemidlalo.
Ngiphinde ngingene futhi nezinye ezemidlalo kusukela ngehora lesihlanu  ntambama imizuzu engamashumi amathathu,” kuqhuba uMthembu.
“Njengamanje ngingenele umcintiswano obizwa ngokuthi yi-Live Your Dream Youth Award lapho kuzotonyulwa umsakazi ovelele emisakazweni yomphakathi. Lomncintiswano uzoba ngomhla ka 29 kuNcwaba [ October]. Nginxusa abantu bangivotela ngokuthumela umqhafazo enombolweni ethi 45633 negama LYD298. Inhloso yami yokungenela lomncintiswano ukuthuthukisa ikhono lami endimeni yezokusakaza ngiphinde ngiphokophelele phambili,” ephetha.